Spain oo Nasiibka u hiiliyay iyo Shakira oo baajisay Bandhig Faneed ay qaban-laheyd si ay u daawato Ciyaarta Italy iyo Spain . - Cakaara News
Spain oo Nasiibka u hiiliyay iyo Shakira oo baajisay Bandhig Faneed ay qaban-laheyd si ay u daawato Ciyaarta Italy iyo Spain .
(CakaaraSport) Jimce 28,2013.Fanaanadda Shakira oo lagu waday xalay inay qabato Bandhig-faneed Dalka Mexico ay ku qabana lahayd ayaa baajisay iyadoo ka door-biday inay daawato Ciyaartii xalay ee Semifinalka ahayd dhex martayna Xulalka qaranka ee Spain iyo Talyaaniga oo ay nasiibkeeda Spain ku timid Ciyaarta kama danbaysta ama Finalka.
Shakira ayaa la arkayey iyadoo bood-boodaysa una dabaal-dagaysa Goolkii Rigooradda ahaa ee Ninkeeda Pique uu ka dhaliyay mid ka mid ah Gool ku laadkii Spain oo ay 7-6 ku badisay Spain kadib markii uu fursad rigoore ah khasaariyay Laacibka Reer Talyaani ee Leonardo Banucci.
(Laacib Pique oo markii uu Goolka Rigooradda dhaliyay Fanaanada Shakira amaba xaaskiisa salaamaya inta uu iska bixiyay Funaadii) Dhanka kale kooxda Dalka Talyaaniga oo ka ciyaar-wanaagsanaa Spain balse nasiibkaaa ka hiilayay xalay iyagoona maalinta axada ah kaalinta 3-aad ay wada ciyaari doonaan xulka Kooxda Uruguay.
Shakira ayaa fursad u heshay xalay inay sawir la gasho Madaxweynaha FIFA oo kulanka Spain iyo Talyaaniga goob joog ahaa iyadoo wajigeeda laga dareemayo farxada guusha ninkeeda pique.